२०-०4-२२ मा व्यवस्थापक द्वारा
कसरी उत्खनन slewing भाग को ख्याल राख्ने? मोटर, रिडसर, घण्टी गियर, घुमाउने केन्द्र बिन्दु, आदि समावेश गरी उत्खनन स्विंग भाग दैनिक मा कसरी उत्खनन slewing भाग कायम गर्न? हेरौं एक नजर! सामान्य रखरखाव र मर्मत ध्यान दिनुहोस्: ...
कसरी उत्खनन ईन्धन बचत गर्न? धेरै मालिकहरू चिन्ता लिनु पर्दछ "ईन्धन बचाउन सहयोग पुर्‍याउन खोदाउने सञ्चालनको लागि के सुझावहरू छन्?" अधिक ईन्धन खपत किनभने, लागत तदनुसार वृद्धि हुनेछ, र लाभ स्वाभाविक रूपले कम हुनेछ। हामी कसरी केही ईन्धन बचाउन सक्छौं ...
खुदाई गर्ने सबै भन्दा सामान्य सानो त्रुटिहरु को मर्मत! / खुदाई सुरु गर्न असफल हुन्छ, पहिले आफैँ मर्मत गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा सिधा सहयोगको लागि सोध्नुहोस्? / मास्टर गर्नुहोस्, अनावश्यक मर्मत लागतहरू हटाउँदै केहि उत्खनन मर्मत र मर्मत गर्ने कलामा माहिर पार्नु भनेको तपाईंलाई राम्रो ई हुनको लागि आवश्यक हुनुपर्ने कौशल हुनुपर्छ।
धेरै मालिकहरू चिन्ता लिनु पर्दछ "ईन्धन बचाउन सहयोग पुर्‍याउन खोदाउने सञ्चालनको लागि के सुझावहरू छन्?" अधिक ईन्धन खपत भएकोले, लागत तदनुसार वृद्धि हुनेछ, र लाभ स्वाभाविक रूपले कम हुनेछ। हामी कसरी कार्य ईन्धनलाई असर नगरी केही ईन्धन बचत गर्न सक्दछौं र ...